नेपाली हुलाकले अष्ट्रेलियाको घर-घरमा ल्याइदिन्छ सामान - Nepali Page
७ जेष्ठ २०७३, शुक्रबार १४:१२ 5,465 पटक-पढिएको
अष्ट्रेलियामा भरखरै आएका हुन् या यतै एक दुई दशक बिताएका सबैलाई फिल हुने कुरा धेरै हुन्छन्। ती मध्ये नेपालको जस्तो कपडा, शैली धेरै मिस हुन्छन् विशेष गरेर चाडवाडमा। लगाउनका लागी कपडा अनि घरमा राख्नको लागी नेपालमा बनेका सामानहरू। भगवानका मूर्ति पनि हुनसक्छन् अनि सजावटका सामान पनि। जुन अष्ट्रेलियामा किन्न पाईंदैन, नेपालबाट ल्याउनको लागी ल्याइदिने मानिस पनि भेटिंदैन। नेपालमा किनेर पठाइदिने आफन्त जति पनि भेटिन्छन्, हुन्छन् तर ल्याइदिने भने पाउन गारो नै हुन्छ। ’cause प्लेनबाट आउनेले ३० देखी ४० केजी मात्र सामान ल्याउन पाउँछन् त्यती सामान चैं आफ्नै हुन्छ। अरूको लागी दुख कसले बेसाइ दिओस्।
अष्ट्रेलियाको विभिन्न सवअर्वमा बस्ने नेपालीका लागी दशैं, तिहार, तीज अनि अरु नेपाली चाडपर्वमा नेपाली सामान अनि कपडाहरूले निक्कै महत्व राख्छन्। नेपालबाट पहिलो पटक आउनेहरूले सुरूमा नल्याएका धेरै चिज हुन्छन् जुन यहाँ काम र बसाईंमा सेटल भएपछी आवश्यक बन्छ तर सजिलै नेपालबाट ल्याउने उपाय पत्तो लाग्दैन। नेपालबाट कसरी कुरीयर गरेर ल्याउने पनि थाहा हुँदैन अनि कुन कुन कम्पनीले कतिमा कसरी ल्याइदेला भन्ने थाहा पाउन पनि गाह्रो नै हुन्छ, किनकी धेरै समय काममा नै बिताउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ र बाध्यता पनि। त्यसमाथी पढाई। एसाइनमेन्टको प्रेसर र तनावको त कुरै नगरूम।
यस्तै धेरै अष्ट्रेलियन जिवनका आरोह अवरोहमा हामी धेरैलाई थाहा नभएको वा ख्याल नगरेको कुरा के हो भने नेपालबाट कुनै पनि सामान ल्याउनको लागी सजिलो उपाय छ, झण्झट पनि नहुने र घरमा नै आईपुग्ने। न कसैलाई फोन गर्नु पर्छ न त कतै सामान बुझ्न तथा लिनको लागी नै जानु पर्छ। साथै लाग्ने पैसा पनि सस्तो छ।
त्यो हो नेपालको हुलाक। नेपालमा धेरैले हुलाक सेवाको प्रयोग गर्दैनन्। त्यसमा पनि अष्ट्रेलिया आएकाहरूले त गरेको आशा अलिक कम नै राख्दा हुन्छ। नेपालको हुलाक सेवा विभाग, त्यसका हाकिम अनि संचार मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीलाई पनि केही भेउ नहोला हुलाकलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ र यसको सेवा कसरी लिने यसले सेवा कसरी दिने तर तपाईं हामी अष्ट्रेलियामा बस्नेलाई थाहा छ हुलाकको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ। अष्ट्रेलिया पोष्टले त्यसको राम्रो उदाहरण दिएको छ संसारलाई नै कसरी व्यवसायिक बनाउने हुलाकलाई भनेर।
सिड्नीको ग्रानभिलमा अष्ट्रेलिया पोस्टले डेलिभरी दिएको हुलाक सेवा विभाग नेपालबाट पठाईएको पार्सल। सामानको तौल र लागेको शुल्क स्पष्ट देखिन्छ।
नेपालको हुलाक सेवा विभागको Express Mail Service (EMS) को प्रयोग गरेर नेपालबाट अष्ट्रेलिया सामान पठाउन सकिन्छ। यो सेवा भनेको नै द्रूत हुलाक सेवा हो जसले एक साता भित्रमा नेपालबाट पठाएको सामान अष्ट्रेलियामा ७ दिन भित्रमा ल्याइदिन्छ। त्यसका लागी सुन्धारामा रहेको गोश्वारा हुलाक कार्यालय वा नेपालमा रहेका आफन्तले जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट पनि सामान पठाउन सक्छन्। हुलाकले नेपालका १५ विभिन्न स्थानबाट यो सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। (यहाँबाट सूची हेर्नुहोस्)
यसरी सामान पठाउँदा सामान भने हुलाक कर्मचारीको अगाडि नै प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसले दिने सेवा र सामानको डेलिभरी विश्वासिलो मात्र होईन सुरक्षित समेत छ। यसरी पठाएको सामानको डेलिभरी अष्ट्रेलियामा अष्ट्रेलिया पोष्टले दिन्छ। नेपालबाट पठाएको ५-७ दिनमा नै तपाईंको ढोकामा नै सामान आईपुग्छ।
काठमाडौंको सुन्धारामा रहेको हुलाक कार्यालयबाट कसरी अष्ट्रेलिया सामान पठाउने त्यसका लागी पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया यहाँबाट जान्नुहोस् (यहाँ क्लिक गर्नुस्)
सस्तो पनि छ ?
नेपालको हुलाकबाट पठाउने भएकाले यसरी नेपालबाट सामान ल्याउनको लागी लाग्ने खर्च पनि सस्तो नै छ। सस्तो भन्नाले मैले सिड्नीबाट फेसबुकमा गरिएको कुरियरको विग्यापन साथै म आफैले नेपालबाट सामान ल्याउँदा लागेको खर्चको आधारमा भनेको हूँ।
हुलाक सेवा विभागले ५०० ग्राम सम्मको प्याकेटको १५०० रूपैंया र त्यस भन्दा माथी हरेक ५०० ग्रामको ४०० रूपैंया शुल्क लिन्छ। हुलाक सेवा विभागको यो सेवाका लागी लाग्ने शुल्क यहाँबाट हिसाब गर्न सकिन्छ। (यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुस्) मूल्य सूची नेपालीमा यहाँबाट हेर्नुस् (यहाँ क्लिक गर्नुस्)
यसरी हुलाकबाट देश हेरेर १० देखी ३१ किलो सम्म वजन र १ मिटर लम्बाई सम्मको सामान ल्याउन सकिन्छ।
थप जानकारीको लागी कहाँ सम्पर्क गर्ने?
फोन :977-1-4227499, 4223512, 4840018 (ext 42)
फोन : 977-1-4258393 (Direct)
फ्याक्स : 977-1-4225145
अघिल्लो यस्तो हो अष्ट्रेलियाको पीआर लिस्टको कुरो, नेपालबाटै गर्न सकिन्छ एप्लाइ
पछिल्लो यहाँबाट हेर्नुस्, कोल्स, टार्गेट, बनिङ्स, केमार्टमा भ्याकेन्सी